(၂၀၁၉) ခုနှစ်မှာ ပရိသတ်တွေ အားရပါးရရှုစားရမယ့် ” မြင့်မြတ် “ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းများ – Askstyle
(၂၀၁၉) ခုနှစ်မှာ ပရိသတ်တွေ အားရပါးရရှုစားရမယ့် ” မြင့်မြတ် “ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းများ
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွေဟာ မြင့်မြတ်ရဲ့ နှစ်လို့ ဆိုရမလိုပါဘဲ ။ မြင့်မြတ်ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသဖို့ အင်မတန်များပြားလွန်းတဲ့အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထဲအထိ ရုံတင်နိုင်မယ့်ရက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ၂၀၁၈ ထဲမှာ မြင့်မြတ် ဟာ ငဒူ ရုပ်ရှင် နဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကောင်းကောင်း မျက်ရည်ချူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ လည်း ထင်ကြေးပေးနေကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက်လည်း မြင့်မြတ်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာလည်း အကယ်ဒမီဆုယူနိုင်မယ့်ရုပ်ရှင်တွေက
ဟောက်စား (မြင့်မြတ်. ကျော်ကျော်ဗို. အိချောပို)၊
ဂျင်းကောင် (မြင့်မြတ်. စိုးမြတ်သူဇာ. ခိုင်သင်းကြည်. အိချောပို. အေးဝတ်ရည်သောင်း)၊
ဟီးရိုး (မြင့်မြတ်. ၀တ်မှုန်ရွှေရည်)၊
ခရေ (မြင့်မြတ်. ဝတ်မှုန်ရွှေရည်)၊ ကျော်ဟိန်းတပည့် (ရန်အောင်. မြင့်မြတ်. ကောင်းခန့်. မို့မို့မြင့်အောင်. ဒေဝီဆူးခက်)၊
ကျောမှာဂဠုန်ရင်မှာနဂါး (ကျော်သူ. မြင့်မြတ်.ဝင်းပအိန္ဒြာ)၊
ဘယ်ညာဘယ်ညာ (မြင့်မြတ်. ဖွေးဖွေး)၊
ငါ၏အမိန့် (မြင့်မြတ်. ထွန်းထွန်း. မိုးဟေကို)၊
အလှည့် (မြင့်မြတ်. နေမင်း. မိုးဟေကို)၊
ဖွေးစိန်မရဲ့ဘော်ဒီဂတ် (မြင့်မြတ်. အိချောပို)၊
အယူတော်မင်္ဂလာ (မြင့်မြတ်. ရန်အောင်. နန်းဆုဦး)၊
လပြည့်ည (မြင့်မြတ်. သင်ဇာဝင့်ကျော်. အိချောပို)၊
နှလုံးသားထဲကဧရာဝတီ (မြင့်မြတ်. မြတ်မှူးခင်)။
Original Gangstar3(မြင့်မြတ်. ယုန်လေး. ယုသန္တာတင်)၊
Special Force (မြင့်မြတ်. ယုန်လေး. ယုသန္တာတင်)၊
ပရမ်းပတာ (မြင့်မြတ်. ကျော်ကျော်ဗို. သင်ဇာဝင့်ကျော်)၊
လူရိုင်းကျွန်း (မြင့်မြတ်. ယုသန္တာတင်. ရွှေသမီး)၊
ဘာလာလာ (မြင့်မြတ်. ကျော်ကျော်ဗို. သက်မွန်မြင့်)၊
ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း (မြင့်မြတ်. ရွှေမှုန်ရတီ)၊
အချစ်ရဲ့လှည့်ကွက် (မြင့်မြတ်. ရွှေမှုန်ရတီ)၊
ဘောစိ၂ (မြင့်မြတ်. တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ)၊
ဖွတ်ကျား (မြင့်မြတ်. ခင်လှိုင်. အိချောပို. ဂွမ်းပုံ)၊
ဒယ်ဒီဖားကင် (မြင့်မြတ်. လွင်မိုး. အိချောပို)၊
မျိုးရိုးဇိုး (မြင့်မြတ်. အေးမြတ်သူ. ပက်ထရစ်ရှာ)၊
တောပေါက်မြို့ပေါက် (မြင့်မြတ်. ကျော်ကျော်ဗို. ညီထွဋ်ခေါင်. ခိုင်သင်းကြည်. သွန်းဆက်)၊
ဟီးရိုး (မြင့်မြတ်. နေနော်. ဝတ်မှုန်ရွှေရည်)၊ချစ်နိုးနိုး (မြင့်မြတ်. အိချောပို)။
သစ္စာနန်းတော် (မြင့်မြတ်. စိုးမြတ်သူဇာ. ရွှေမှုန်ရတီ)၊
မိုက်မဲချစ် (မြင့်မြတ်. ရွှေမှုန်ရတီ. ခင်ဝင့်ဝါ)၊
ဂျလေဘီ (မြင့်မြတ်. အိန္ဒြာကျော်ဇင်)၊ ရည်းစားရွေးနည်း (မြင့်မြတ်. ဖွေးဖွေး)၊
တစ္ဆေများနှင့်ပျော်မြူးခြင်း (မြင့်မြတ်. အိချောပို.ပက်ထရစ်ရှာ)၊
လမ်းပေါ်ကနန်းတော် (မြင့်မြတ်. ပက်ထရစ်ရှာ) စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကို (၂၀၁၉) ခုနှစ်မှာ ပရိသတ်တွေ အားရပါးရရှုစားရမှာဖြစ်ပါကြောင်း ။
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုနှဈတှဟော မွငျ့မွတျရဲ့ နှဈလို့ ဆိုရမလိုပါဘဲ ။ မွငျ့မွတျပါဝငျတဲ့ ရုပျရှငျတှေ ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ ရုံတငျပွသဖို့ အငျမတနျမြားပွားလှနျးတဲ့အတှကျ ၂၀၁၉ ခုနှဈထဲအထိ ရုံတငျနိုငျမယျ့ရကျတှကေိုစောငျ့ဆိုငျးနရေဆဲဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။ ၂၀၁၈ ထဲမှာ မွငျ့မွတျ ဟာ ငဒူ ရုပျရှငျ နဲ့ ပရိသတျတှကေို ကောငျးကောငျး မကျြရညျခြူနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျလညျး အကယျဒမီ ရှစေငျရုပျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမယျလို့ လညျး ထငျကွေးပေးနကွေသူတှလေညျးရှိနပေါတယျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျလညျး မွငျ့မွတျရဲ့ ဇာတျလမျးတှထေဲမှာလညျး အကယျဒမီဆုယူနိုငျမယျ့ရုပျရှငျတှကေ ဟောကျစား (မွငျ့မွတျ. ကြျောကြျောဗို. အိခြောပို)၊ထာဝရထကျနှဈဆ (မွငျ့မွတျ.မငျးမျောကှနျး.ရှမှေုနျရတီ)၊ဂငျြးကောငျ (မွငျ့မွတျ. စိုးမွတျသူဇာ. ခိုငျသငျးကွညျ. အိခြောပို. အေးဝတျရညျသောငျး)၊ ဟီးရိုး (မွငျ့မွတျ. ဝတျမှုနျရှရေညျ)၊ခရေ (မွငျ့မွတျ. ဝတျမှုနျရှရေညျ)၊
ကြျောဟိနျးတပညျ့ (ရနျအောငျ. မွငျ့မွတျ. ကောငျးခနျ့. မို့မို့မွငျ့အောငျ. ဒဝေီဆူးခကျ)၊ ကြောမှာဂဠုနျရငျမှာနဂါး (ကြျောသူ. မွငျ့မွတျ.ဝငျးပအိန်ဒွာ)၊ ဘယျညာဘယျညာ (မွငျ့မွတျ. ဖှေးဖှေး)၊ ငါ၏အမိနျ့ (မွငျ့မွတျ. ထှနျးထှနျး. မိုးဟကေို)၊ အလှညျ့ (မွငျ့မွတျ. နမေငျး. မိုးဟကေို)၊ ဖှေးစိနျမရဲ့ဘျောဒီဂတျ (မွငျ့မွတျ. အိခြောပို)၊ အယူတျောမင်ျဂလာ (မွငျ့မွတျ. ရနျအောငျ. နနျးဆုဦး)၊ လပွညျ့ည (မွငျ့မွတျ. သငျဇာဝငျ့ကြျော. အိခြောပို)၊နှလုံးသားထဲကဧရာဝတီ (မွငျ့မွတျ. မွတျမှူးခငျ)။Original Gangstar3(မွငျ့မွတျ. ယုနျလေး. ယုသန်တာတငျ)၊
Special Force (မွငျ့မွတျ. ယုနျလေး. ယုသန်တာတငျ)၊ပရမျးပတာ (မွငျ့မွတျ. ကြျောကြျောဗို. သငျဇာဝငျ့ကြျော)၊လူရိုငျးကြှနျး (မွငျ့မွတျ. ယုသန်တာတငျ. ရှသေမီး)၊ ဘာလာလာ (မွငျ့မွတျ. ကြျောကြျောဗို. သကျမှနျမွငျ့)၊ ဝုနျးဝုနျးဒိုငျးဒိုငျး (မွငျ့မွတျ. ရှမှေုနျရတီ)၊အခဈြရဲ့လှညျ့ကှကျ (မွငျ့မွတျ. ရှမှေုနျရတီ)၊ လူလိမ်မာနိုငျငံမှာဆရာကတြဲ့လူ (ဧညျ့သညျတျော)၊
ဘောစိ၂ (မွငျ့မွတျ. တက်ကသိုလျဂှမျးပုံ)၊ဖှတျကြား (မွငျ့မွတျ. ခငျလှိုငျ. အိခြောပို. ဂှမျးပုံ)၊ဒယျဒီဖားကငျ (မွငျ့မွတျ. လှငျမိုး. အိခြောပို)၊ မြိုးရိုးဇိုး (မွငျ့မွတျ. အေးမွတျသူ. ပကျထရဈရှာ)၊ တောပေါကျမွို့ပေါကျ (မွငျ့မွတျ. ကြျောကြျောဗို. ညီထှဋျခေါငျ. ခိုငျသငျးကွညျ. သှနျးဆကျ)၊ ဟီးရိုး (မွငျ့မွတျ. နနေျော. ဝတျမှုနျရှရေညျ)၊ခဈြနိုးနိုး (မွငျ့မွတျ. အိခြောပို)။သစ်စာနနျးတျော (မွငျ့မွတျ. စိုးမွတျသူဇာ. ရှမှေုနျရတီ)၊မိုကျမဲခဈြ (မွငျ့မွတျ. ရှမှေုနျရတီ. ခငျဝငျ့ဝါ)၊ဂလြဘေီ (မွငျ့မွတျ. အိန်ဒွာကြျောဇငျ)၊
ရညျးစားရှေးနညျး (မွငျ့မွတျ. ဖှေးဖှေး)၊တစ်ဆမြေားနှငျ့ပြျောမွူးခွငျး (မွငျ့မွတျ. အိခြောပို.ပကျထရဈရှာ)၊လမျးပျေါကနနျးတျော (မွငျ့မွတျ. ပကျထရဈရှာ) စတဲ့ ရုပျရှငျကားကွီးတှကေို (၂၀၁၉) ခုနှဈမှာ ပရိသတျတှေ အားရပါးရရှုစားရမှာဖွဈပါကွောငျး ။